Taliska ciidanka bileyska somaliland oo Dacwad kusoo Oogey wargeyska FOORE oo kasoobaxa Caasimada Hargeysa – Saraar Media
Home›All War›Somaliland›Taliska ciidanka bileyska somaliland oo Dacwad kusoo Oogey wargeyska FOORE oo kasoobaxa Caasimada Hargeysa
Taliska ciidanka bileyska somaliland oo Dacwad kusoo Oogey wargeyska FOORE oo kasoobaxa Caasimada Hargeysa
Sidaa calaamiga ah ayaa saxaafada iyo dastuurka Somaliland iskuwaafaqsan yihiin. Inaan Qatar xabadi leh laga shegen ciidamada qaranka iyo kuwa amaanka ee booliiska . Wararku galinkii dambe Laidlaw dhexmarayey ayaa sheegay in laxidhay xaruntii wargeyska. Balse waxaa warka beeniyey tafatiraha guud oo aanuu laxadhiidhnay cabdirashiid sheeko cabdi waxaan.
Sidookale warbixinta uu daabacay wargeyska foore ayaa sheegaysa warbixin ay soosaartay dawlada SONSAF oo kumidoobeen ururada aan dowliga ahayen. Balse Aaat shaqo kulahayn wargeyska.taasoo aan ahay muxuud wargeyska kubeegsanayo ciidanka bileyska somaliland.
Wariye maxamed Cali xaashi
Ardaydii somaliland ugu sareysey oo ay soo ...
Ujeedooyinka Safarka kENYA ee Gudoomiyaha xisbiga WADDANI….
Sharafta ciidanka Somaliland: iyo Diyaargarowga Dabaaldaga Sanadguuradii 27
Daawo: Jamaal Cali Xuseen oo ka Hadlay Go’aankii Maxkamadda Sare ka Gaadhay Murankii UCID
Daawo: Madaxweyne Siilanyo oo Qasrigiisa kula Kulmay Safiirka Ingiriiska u Fadhiya Somaliya iyo Somaliland (Ms Harriet Mathews )
Watch Video: World’s largest aircraft the Airlander 10 takes first flight